Tim Cook ga-aga India ịchọ nkwekọrịta maka mgbasawanye nke Apple | Esi m mac
O doro anya na Apple ga-eme ihe mgbe nsonaazụ ego ha gosipụtara na nso nso a ma ọ dị ka ụlọ ọrụ ahụ enwebela ahịa mbụ n'ime afọ iri na nke ahụ na-eme ka ọtụtụ ndị na-etinye ego ụjọ, nke anyị nwere ike ịsị na mmadụ abụọ kachasị mkpa kpebirila iwepu mbak niile ha nwere na ụlọ ọrụ ahụ.
Taa, anyị na-ekwughachi na onye isi ọrụ ugbu a Tim Cook ga-aga India n'izu a iji soro ndị ọchịchị obodo ahụ kwuo maka ire ere ngwaahịa apụl. Buru n'uche na India Ọ bụ mba nke abụọ kacha nwee ọnụọgụ karịa China ma ọ bụ ya mere Apple ji na-ekwusi ike na ya.
Ndị nke Cupertino kwesịrị ịgbasa na China na India bụ mba ndị ga-ekwe ka Apple gaa n'ihu na-enweta uru. Agbanyeghị, n'agbanyeghị ihe niile Apple mere na China n'ihe banyere ngwaahịa ya na mmeghe nke ụlọ ahịa anụ ahụ, uru na mba ahụ etobeghị ka ha tụrụ anya ya ma ya mere Ha na-ele India anya ugbua nke hụrụ na ịrị elu 58% na ahịa n'afọ gara aga.
Dị ka anyị gwara gị, Tim Cook ga-aga India iji zute Mịnịsta Ala India Narendra Modi iji mechie nkwekọrịta na ịkpụpụta ebe ndị siri ike, dị ka ị maara, sitere na Apple chọrọ ịmalite ire iPhones agbazigharị iji nwere ọnụ ọnụ dị ọnụ ala karịa na mba ahụ, nke Prime Minister anaghị ekwe.
Ebumnuche Cook na mba ahụ apụtabeghị mana ọ bụ ezie na na mgbakwunye na nzukọ ndị isi gọọmentị India ga - ezute ụlọ ọrụ ndị ọzọ bụ ndị ga - enyere Apple aka ịgbasa na mba ahụ. Anyị ga-ahụ ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịnye gị nkọwa ndị ọzọ gbasara nleta Cook na India n'ime izu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Tim Cook na-aga India ịchọ nkwekọrịta maka mgbasa Apple
Apple tufuru nnukwu ndị na-etinye ego ya